Roulette nkata vidio
Video nkata roulette. All video chats na otu saịtị
Na-elekọta gị, anyị mepụtara nkata nkata! Ọtụtụ puku ndị bi na mbara ụwa a na-eji saịtị anyị. Iji sonyere anyị, naanị ị chọrọ kọmputa nwere igwefoto na ịnweta Internetntanetị. Mgbe ị debanyere aha, ị nwere ike ịmalite ịchọ onye na-agwa gị okwu iji gwa gị okwu. Nkata vidio ga- akpọ ọtụtụ puku mmadụ ka ha kpaa nkata. Ga-enwe ike ịchọta ndị enyi ọhụụ ma ọ bụ ọbụlagodi ịhụnanya site na iji ụkpụrụ roulette. Biko, mara ma soro usoro iwu anyị maka iji ọrụ ahụ. Ezubere ya maka nkasi obi nkwukọrịta.
Na saịtị a anyị gbalịrị ịnakọta mkparịta ụka vidiyo vidio niile na-achọghị ndebanye aha. Ebumnuche anyị bụ igosipụta ihe dị ka Chatroulette. Ma ọ bụ, dị ka anyị na-akpọ ya Russian chatroulette, chatrandom. Ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ọtụtụ aha ndị yiri ya. Onye ọ bụla ga - achọta isiokwu kwesịrị mkparịta ụka maka onwe ya. Ebe i nwere ike dị nkata, chọta enyi ma ọ bụ enyi nwanyị. Malite mmekọrịta dị njọ ma ọ bụ belata onwe gị na igwefoto igwefoto. Maka nke a, anyị kpebiri iji mkparịta ụka na-enweghị usoro kparịta ụka dị iche iche. Ee, anyị nwere ebe eji akparịta ụka nke ọma. Ọ bụrụ na ị gafeela afọ iri na asatọ, ị ga-aga mkparịta ụka dị otu a ka ị chọta onwe gị onye gị na ya ga-anọ.
Mkparịta ụka vidiyo niile na Russia na ụwa.
Site na ịga na nkata vidio ọ bụla dị na weebụsaịtị anyị, ị nwere ike ịchọta ndị nwere mmasị dị iche iche maka onwe gị. Onye ozo nwere ike ibu onye obula. Uzo ndi mmadu si abiara anyi si mba di iche. Naanị n'ihi na a na-achịkọta mkparịta ụka vidiyo kacha ewu ewu n'ụwa.
Mba ndị bụ isi bụ: United States, Germany, Spain, Russia, Ukraine, France.
Anyị gbalịrị ịnakọta mkparịta ụka vidiyo niile ebe ndebanye aha ma ọ bụ nke iwu. Ọ bụ ya mere na anyị ebipụghị Chatroulette mbụ. Mkparịta ụka nkata na-achọ ndebanye aha, yana iwu siri ike, gbakwunye ihe niile na-eme ebe ahụ na ụgwọ akwụ ụgwọ.
Emepụtara nkata vidiyo maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na nkwukọrịta. Emepụtara ya na ụkpụrụ nke roulette Russia, ya mere aha ya bụ "Video Chat Roulette". Na-ahọrọ interlocutor site atụ ogho na roulette chat, na mgbe ịkwụsị ya na a na-ahọpụta họrọ interlocutor .. Mgbe ahụ, gwa onye dara n'oge a ma ọ bụ bido chatroulette ahụ ọzọ. Chat roulette bụ ihe na-atọ ụtọ. Nwere ike izute ọtụtụ mmadụ n’otu anyasị. Chọpụta akụkọ kachasị ọhụrụ n'onwe gị. Enwere n'ezie otu snag, ọ bụrụ na ịchọrọ iso ndị si mba dị iche iche kwukọrịta, ị ga-achọ ịmụ ma ọ dịkarịa ala Bekee. Na ndị na-amụ ya, ịkparịta ụka vidiyo ga-abụ omume asụsụ ọzọ. Nwere ike ịmụ ma mụọ asụsụ mba ọzọ ọ bụla. Ọ baghị uru n ’onye ọbụla nwere ike ịmụ naanị asụsụ ala ha. Russia buru ibu, na ọnụ ọgụgụ ndị na-asụ Russian buru ibu!Na saịtị ị ga-ahụ onye ị ga-anọ na mgbede. Ajụjụ: Kedu ka esi masị gị na Videochat ma bụrụ onye ama ama? Azịza: omume na omume ndị ọzọ! N’ebe a, ikwesiri ighota onye ga-ano na mgbe igwa, na ebe ikwesiri igbachi nkiti, ebe igha egwu, na ebe inye ezigbo ndumodu Jiri nkwanye ùgwù na-akwanyere onye gị na ya na-emekọ ihe ùgwù, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ịgwa ya okwu. Na-agbaso ụkpụrụ omume ọma. Ga-enwe ọ gainingụ inweta inweta ewu ewu na nkata ahụ. Nzuko "akara aka gị" na nkata vidiyo - akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu?Ga-enwe ọ gainingụ inweta inweta ewu ewu na nkata ahụ. Nzuko "akara aka gị" na nkata vidiyo - akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu?Ga-enweta ọ gainingụ na ịnweta ewu ewu na nkata ahụ. Nzuko "akara aka gị" na nkata vidiyo - akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu?
Nkata vidiyo - atụmatụ nkwukọrịta
Gumụ okorobịa na ụmụ agbọghọ si mba dị iche iche na-achọ onye na-eme mkparịta ụka na-adọrọ mmasị ebe a, di ma ọ bụ nwunye ha, ma ọ bụ opekata mpe nkata vidiyo na-akwụghị ụgwọ. Ọtụtụ mgbe, ha na-ahụ onye na-ekwu okwu ya na wiilị roulette, a na-akpọkwa ya chatroulette. Site n'ụzọ, Agaghị m echezọ ikwu na anyị nwekwara free chatroulette Russia. All video chats na otu saịtịnke mere na ị nwere ike ikwurịta okwu na mmadụ dị iche iche n’efu na n’enweghị ndebanye aha. A na-ahụta Chatroulette dịka ọrụ kachasị ewu ewu, mana ọ dịtụghị mma. Chatroulette.com nwere ọtụtụ ogbo. Ma mgbe ụfọdụ ha anaghị adị ala karịa ya na mma na ọnụọgụ nke ndị na-eme mkparịta ụka. Enwere analog nke Chatroulette na Russia, ọ dịkwa n'efu. Ọ ga-amasị m ịchọrọ gị ka gị na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ mara mma nwee nkwukọrịta. Ugbu a enwere ọtụtụ ikpe mgbe di na nwunye, na-ekwu maka onye ha maara, sị: "Anyị zutere na Internetntanetị." Ee, ha ga-amata onwe ha, mgbe ahụ ha na-ezukọ na ụwa n'ezie, wee lụọ di na nwunye ma bikọta ọnụ. Ihe a nile bụ eziokwu n'ezie! Ezigbo akụkọ banyere ezigbo ndị mmadụ! Gị onwe gị kwa, ị nwere ike izute di ma ọ bụ nwunye gị na mberede ma ọ bụ bido ịchọ ya. Egbula - ọ dịghị onye ga-ata gị ebe a site na igwefoto. Mepụta ikuku dị mma maka onye na-ekwu okwu iji ghọtana ị dị mkpa.
Debanye aha na nkata vidiyo iji nọrọ mgbede na-atọ ụtọ n'ebe ahụ. N'ebe a, ị nwere ike nwee obi ụtọ na-enweghị ịhapụ ụlọ gị na-ejighị ego. Ga-enwe ndị ọhụụ, mkparịta ụka na-atọ ụtọ, ị ga-ama akụkọ kachasị ọhụrụ. Gịnị mere ị ga-eji nzuzu nọdụ n'ihu TV na mgbede niile mgbe ị ga-agwa ndị ezigbo mmadụ okwu? Ee, enwere ihu igwe na-adịghị mma n’èzí, mana oge ụfọdụ enweghi ike mgbe arụchara ọrụ, nkata vidiyo ga-enyere aka ebe a. Kedu nke dị na mgbe niile ma ọtụtụ narị puku mmadụ dị njikere ịgwa gị okwu! Jisie na nkwurịta okwu na ndị enyi na-adọrọ mmasị!
Mkparịta ụka mkparịta ụka vidiyo na Moscow
Ọ ga-amasị m ịme ka ị mata ọrụ ọhụụ ọhụụ maka ndị bi na Moscow na mpaghara Moscow. Vidiyo nkata vidio bụ nkwukọrịta site na igwefoto weebụ. Onye nọ gị n’ihu bụ onye gị na ya na-ekwurịta okwu.
Ysmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ makwara uru nke nkata vidiyo. Ọ dị na eziokwu na ị naghị azụta ezi na poke. M zutere a onye chat na gị akwụkwọ ozi dịruru ruo ọnwa. Na-agbanweta foto, na-egbusi oge ọ bụla ọzọ. Na oge bụ ihe dị oke ọnụ ahịa anyị nwere. Mgbe oge ruru izute, ọ dịghị ihe ọzọ ị naghị enweta nkwa ahụ. Na ndị enyi mechara kwuo na nke a bụ foto nke ụfọdụ ụdị Norwegian. Anyị na-enye gị mkparịta ụka vidiyo nke Moscow maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ụmụ okorobịa. Ugbu a ị nwere ike iji ọrụ nke nkata vidiyo isi obodo. Cho na ibe anyi.
Taa ọtụtụ mmadụ na-amata ibe ha, na-ekwukọrịta okwu, na-eme enyi ma na-ebido mmekọrịta siri ike, ebe ha zutere nke ọma. Ọ dị mfe n ’ụzọ ahụ. Nwoke dị obi umeala nwere ike ọ gaghị amata enyi ya nwanyị, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ naghị ehichapụ ọtụtụ ókè, ụjọ anaghị atụ ya, ọ ga-atụkwasịkwu onwe ya obi. Mkparịta ụka vidiyo na-agụnye ọ bụghị naanị nkwurịta okwu ọnụ, kamakwa eziokwu ahụ bụ na a ga-eji anya gị hụ gị, tụlee, tụlee ka ị bụ onye gị na ya na-emekọrịta ihe. Gbalịa ịmepụta usoro n’ime ụlọ gị. Gbanwee ọdịdị ka ị wee nwee mmasị na onye na-ekwu okwu. N'okwu a, ngwongwo nke isiokwu m chọrọ ikwu ga-enyere aka. Ikekwe ọ dịghị ọchịchọ ọ bụla ịhụ. N'okwu a, ị nwere ike ịgbanwe ka onye ọ bụla ghara ịmata gị. Ma ọ bụ jiri ngwa mmezi pụrụ iche nke ga - enyere gị aka ịgbanwe ma ọ bụ kpuchie ọdịdị gị.
Maka ịdị mfe na ịdị mfe nke nkwukọrịta na ịntanetị, anyị ewetala mkparịta ụka vidiyo niile site na iji ụkpụrụ roulette na otu saịtị. Ya mere nkwukọrịta ga-adị mfe ịnweta ma dịkwa mfe maka ọtụtụ ndị na-achọ ndị na-eme mkparịta ụka.
Emepụtara mkparịta ụka mkparịta ụka ihe dịka afọ 5 gara aga. Typedị ụdị ọchụchọ a bụ naanị inweta ewu ewu. Enwere ọtụtụ nkata vidiyo kwa afọ. Nke a bụ ihe mere anyị ji anakọta ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ maka ntụrụndụ gị.
A na-eleta nkata vidiyo ahụ site na ọtụtụ puku ndị na-esite na kọntinent dị iche iche. Iwu ojiji dị mfe, yabụ itinye ha n’ọrụ agaghị ebute mgbaka. Ejiri nkata vidiyo jiri usoro nke nhọrọ aghara nke onye na-emegharị okwu. Ya mere, akpọrọ ya: Chatroulette, na Russian - "nkata roulette". O zuru ezu ịnweta kamera weebụ, obere oge na ọnọdụ maka ịkparịta ụka n'onntanet na isiokwu dị iche iche.
Isi mmalite nke nkata vidio vidio si Moscow, ebe onye okike ya bi na mbụ. Ugbu a mba ọ bụla nwere ọ dịkarịa ala otu, nke ya analog Chatroulette. Na ụdị ụfọdụ nke roulettes, ị nwere ike inyocha site na okike, dịka ọmụmaatụ, site na ịhọrọ naanị ụmụ agbọghọ.
N'ime ọha mmadụ, Intanet dị oke mkpa. Ndị mmadụ na-ahọrọ nkwukọrịta nke ọma iji kwurịta okwu. Ọchịchọ ha kwere nghọta. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ekwurịta okwu, site na kamera kamera, ọ dị mfe ịgbanwe onye na-ekwu okwu ma ọ bụrụ na ọ dabara na ya adabaghị. M pịa bọtịnụ "esote" ma enwere onye na-ekwu okwu n'ihu gị. Ọ bụ nke a na nkata vidio vidio roulette na-akwụ ndị na-agba ya ụgwọ.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na mkparịta ụka na-akparịta ụka aghọwo ihe nkịtị. Ndị mmadụ na-amata ibe ha, ma gaa na-eleta ibe ha. Nye ọtụtụ ndị, mmekọrịta ịhụnanya bụ ụzọ ọhụrụ ịkọ. Na ụfọdụ ndị, ọ bụ naanị ụzọ iji agafe oge ma gosipụta ndị otu ọzọ.
Chat Roulette maka ịrụkọ ọrụ ọnụ
Mkparịta ụka vidio Roulette 18 + - ga-abụ nhọrọ magburu onwe ya maka izu ike ọbụlagodi ndị mmadụ na-ekwo ekwo. Ọ bụrụ na ị nwere obere oge ma na ị nwere mmasị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, egbula ohere iji nwaa nkata ntanetị anyị, ebe ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ na-eme. Ọbụna na-ahapụghị ụlọ, dinara na sofa mara mma, ị nwere ike ịchọta onwe gị nke ọma onye na-eme mkparịta ụka mara mma. Site na ndị na - ege ntị nke ndị ọrụ, ị ga - enwe ọtụtụ mgbe niile. Họrọ ọhụụ ọhụrụ n'ịntanetị maka onwe gị kwa ụbọchị ma ike agwụla gị.
Mmekọahụ Mmekọahụ: Nzuzo nke Nkwurịta Okwu
Ọ bụghị ihe nzuzo na nkwurịta okwu na isiokwu ahụ bụ otu n'ime ụkpụrụ kacha mma maka mmadụ ọ bụla. Na-enweghị nkwukọrịta na kamera kamera ahụ, enweghị ọganihu na mmekọrịta chiri anya, nkwukọrịta kwalite mmekọrịta na nwoke na nwanyị na ntanetị na-enyere aka dozie ọtụtụ nsogbu, ịnwe ezigbo oge ọnụ, ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị, ọmụmụ ihe na ọbụlagodi ndụ onwe onye
Nkata na a random enyi maka chiri anya
Ndụ chiri anya nke oge a bụ ihe dị mgbagwoju anya. Ndị na-eto eto, na-agba mbọ ị nweta ezigbo ọrụ maka onwe ha, oge ụfọdụ na-echefu iwulite ndụ onwe ha na imeta ndị enyi, na-enweghị oge ịmalite ezinụlọ ma na-ekiri ọtụtụ mgbe. zuo ike ma zuru ike. Ọ bụrụ na owu na-ama gị ụzọ, ị na-eme ihere maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ndụ n'ezie, mgbe ahụ ọ bụ oge ịchọpụta ịtụnanya vidio nkata vidio na onye mmekọ nkịtị maka mmekọrịta chiri anya .N'ebe a, mkpakọrịta nwoke na nwanyị 18+ na isntanetị dị mfe karị, n'ihi na onye ọ bụla ị hụrụ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo nwere mmasị na nkwukọrịta na-akpali akpali na ndị ọhụụ ọhụrụ, ọtụtụ na-aga na roulette ka ha pụọ ​​na-ele ibe ha anya n'anya na-eji a kamera. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ maka ụdị ụtọ na agba dịgasị iche iche ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ịchọta onye ga-eme gị obi ụtọ ma soro ya nwee mkparịta ụka na-atọ ụtọ.Ọtụtụ ndị nwara iso nwoke na nwanyị na-akparịta ụka na kamera na nkata achọpụtala ndị enyi ọhụrụ kwesịrị ntụkwasị obi site na mba dị iche iche ma nwetakwa onye òtù ọlụlụ. Ekwela oge gị, bata bata nwee ọ ,ụ, na-egbochi ike ọgwụgwụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ọtụtụ ndị na - ahọrọ cha cha vidio vidio anyị ma ọ bụ ya kpatara ya:
- Dị mfe ma n’otu oge ahụ na-atọ ụtọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị maka mmekọrịta chiri anya- Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-emeghe oge niile maka mkparịta ụka na-atọ ụtọ n’isiokwu - Oge magburu onwe ya iji kparịta ụka n’enweghị aha, mgbe onweghị onye ga-amata gị wee jụọ maka nke gị- Chọta ndị mba ọzọ ndị enyi na ọbụlagodi mkpụrụ obi maka ịme ihe mgbe niile na kamera ma ọ bụ ibi ndụ- Oge magburu onwe ya iji wepu ihere, mụta iso onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị na-ekwurịta okwu na ọnọdụ ibi ndụ- ohere bara uru iji kparịta ụka site na mkparịta ụka vidiyo na ezigbo oge yana ọnụọgụ na-enweghị njedebe nke ndị mmadụ, họrọ okike na mmekọrịta chiri anya nke onye na-emegharị ma ọ bụ onye na-emegharị ọnụ
Roulette maka ndị okenye - Chọpụta nkwukọrịta ịnweta na ụdị ọhụụ!
Oge agafeela mgbe anyị mata enyemaka nke SMS na emoticons na foto dị jụụ. Kpụrụ ederede dị mma, mana ọ nwekwara ọghọm ya. Mgbe ị na-edekọ onye na-ekwuchitere gị okwu, ị gaghị enwe ike ijide n'aka ụdị onye ọ bụ. Ihe ndekọ adịgboroja na-eme ka ọtụtụ ndị nwee mmechuihu na nkwukọrịta.Ma ọ bụ ndị webcam maara nke ndị mmadụ na ndị nwere ike ịgba ọtọ, kpamkpam wezuga oge a. N'ihi nkwurịta okwu vidiyo, ndị na-akparịta ụka na-akparịta ụka na-ahụ ibe ha na ezigbo oge ma gosipụta ezi mmetụta uche n'oge mkparịta ụka ahụ. Nke a bụ ihe niile ụdị ọhụụ nke mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị nke na-enye echiche dị iche iche nke mmadụ ma na-enye gị ohere ịmatakwu ya nke ọma.
Nkwurịta okwu bụ otu n’ime mkpa dị mkpa mmadụ nwere. Mkparịta ụka Roulette bụ ụzọ dị mma na teknụzụ iji kwurịta okwu na ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị sitere n'akụkụ ụwa niile site na nkwukọrịta vidiyo. Ihe oru ngo a jikọtara ọtụtụ puku ndị ọrụ yana ọ nọ n'ọnọdụ mmepe oge niile iji mee ka nkwukọrịta gị dị mma, na-enwu gbaa ma na-atọ ụtọ.
Mkparịta ụka mkparịta ụka n'ọtụtụ ụzọ karịrị ike nke nkata nkata, na-ekwe ka ndị na-agwa gị okwu kwurịtara okwu ihu na ihu, karịa nkụ na-enweghị isi. Y’oburu n’inweghi onye ozo gha achoputa ya, inwere ike ichota onye gi na ya n’acho site na pigharia n’aka ndi n’eji oru ugbu a. N'ihi ya aha nkata - roulette, n'ihi na ọ na-enwekarị ihe ijuanya (ị maghị onye ị ga-ahụ na windo ọzọ).
Nkwurịta okwu na saịtị ahụ, ọ bụrụ na achọrọ ya, nwere ike ịbụ onye a na-amaghị aha ya, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịkpa àgwà dị jụụ (n'ime ihe kpatara ya,) na-enweghị nchegbu gbasara ihe ọha mmadụ ga-eche banyere ha. Na mkparịta ụka ụfọdụ na roulette, a na-ekpughere ezigbo amara mmadụ, ọ na-egosi onwe ya dịka ọ dị n'ezie, nke anaghị ekwe omume ịme ọbụlagodi n'etiti ndị dị nso.
Mkparịta ụka nkata na-enye ndị ọrụ ohere pụrụ iche maka nkwukọrịta ma nwee ọtụtụ uru dị mkpa karịa ọrụ ịntanetị na-adịbu.
Nkata nkata dị mfe
Iji malite ịmalite ikwurịta okwu, ịkwesighi ịgafe ndebanye aha dị mgbagwoju anya. O zuru ezu iji gbanye kamera wee pịa bọtịnụ "Chọta onye ibe". Ọrụ niile bụ n'efu, enweghị ọrụ zoro ezo na saịtị ahụ. Onye nkwukọrịta nkwukọrịta ga-ejikọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi, ma e wezụga, ewu ewu nke ọrụ ahụ na-eto kwa ụbọchị yana isi nke ndị ọrụ ọhụụ. Chat roulette bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa nchebe iji zute ndị ọhụụ kwa ụbọchị.
Mma na ọsọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike ịgakwuru mmadụ n’okporo ámá ma gwa ha ka ha zute ya, nke ka nke, n’ebe onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya nọ. Nke a bụ otu esi ahazi anyị - ọ bụghị mmadụ niile ka ọnọdụ ya na-emegharị, na ọtụtụ nkwanye mmekọrịta na-eme ka ndị mmadụ bụrụ ndị ọbịa nye ibe ha. Mpụta nke netwọkụ mmekọrịta na-eme ka usoro mkpakọrịta nwoke na nwanyị dị mfe, mana edozighi nsogbu ahụ - imirikiti ndị ọrụ na-ekwurịta okwu ebe ahụ na ndị enyi ha na ndị enyi ha sitere na ndụ n'ezie, ha na-echekwa echiche nke ọhụụ. Na nkata nkata, ọnọdụ ahụ dị iche - ndị ọrụ na-abanye na ebumnuche ụfọdụ iji zute ma soro ndị a na-amaghị ama kwurịtara okwu site na nkwukọrịta vidiyo. Ọ dịkarịrị mfe ịme ndị enyi na-adọrọ mmasị nke mmadụ na-ege ntị na nkwukọrịta.
Ikwu ezigbo n’ihu dị mfe dịka ịmata mmadụ
Onye obula n’onye n’otu n’otu - dika ihe masiri ya, ihe ndi ichoro, obi oma ya, agwa ya. Ọtụtụ mgbe echiche mbụ na-eduhie, onye ọhụụ ọhụrụ abụghịkwa onye achọrọ maka nkwukọrịta na-adọrọ mmasị. N'ihe banyere nzukọ n'okporo ámá ma ọ bụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. netwọk, ị nwere ike ịchọpụta naanị na ụbọchị mbụ, yana iji kewaa onye na-ezighi ezi ị ga-ahazi mkparịta ụka na-adịghị mma. Na roulette akparịta ụka, pịa bọtịnụ "Ọzọ", na nke abụọ na-esote ị ga-ahụrịrị onye ọhụụ ọhụrụ.
Nkwurịta okwu na ịntanetị dị mma karịa na kamera kamera
Ọ dịghị ebe mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike ịmata mmadụ ngwa ngwa site na nkwukọrịta vidiyo. Site na ọbịbịa nke nkata roulette, ọ nweghịzi isi ọ bụla n'iyi oge na akwụkwọ ozi akọrọ na nke na-agwụ ike, n'ihi na ị nwere ike ịhụ onye ọhụụ ọhụụ na-ebi ndụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndị wayo na ntanetị ndị na-eme ka ha bụrụ ndị ha bụ n'ezie, na-eji akaụntụ adịgboroja na data na foto ndị ọzọ. Na nkata vidiyo, a na - ewepu omume a - ọ gaghị ekwe omume ịgha ụgha vidiyo na oge.
Nchekwa na jụụ
A na-achịkwa iwu maka iji nkata vidiyo ahụ, na-ata ahụhụ omume na-adịghị mma. Onye na-akparị ndị ọrụ ndị ọzọ na n'ụzọ ọ bụla mebiri iwu ọha na eze nke ịdị ọcha, gọọmentị ga-amachibido ya n'oge na-adịghị anya. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ nke ọrụ ahụ bụ ndị ziri ezi, ndị nwere obi ebere na ndị nwere uche ime mmụọ. Ọ bụrụ na ịmaghị mmadụ - gbanwee mebere roulette na ndị ọhụụ mara mma!
Kwuo "Mba!" owu ọmụma
Ọ bụrụ na owu na-ama gị, na ọ nweghị onye ọ bụla nọ nso nke gị na ya nwere ike ịkparịta ụka, yabụla na ọ ga-abụ mope. Mepee nkata roulette ma kparịta ụka na obi ụtọ gị. Ọtụtụ ndị ọrụ na-arịba ama na mgbe nkeji ole na ole na-akparịta ụka vidiyo na ndị dị iche iche, ọ bụghị otu ụzọ ochie nke mwute na-adị. Na aha njirimara nke ndị ọrụ na nzuzo nke nkwukọrịta na-enye gị ohere ịkekọrịta ezigbo mmekọrịta gị na ndị ọhụụ ọhụụ ma nwee ọ communicụ na-ekwurịta okwu na-enweghị ọbụna ịhapụ ụlọ gị.
Banye n'ime ụwa nke na-akpali akpali nkwurịta okwu na online video nkata Vichatter
Bịanụ na Wichatter! N'ebe a, ị ga-enwe nkwukọrịta ndụ n'etiti ọtụtụ puku ndị, dị ka gị, na-arọ nrọ nke ihe ndị na-akpali akpali. Naanị gbanye igwefoto ma nwee ọmarịcha oke ọnọdụ dị mma ugbu a!
Cheedị echiche iso ndị si n'akụkụ nile nke ụwa na-ekwurịta okwu! Nwere ike ịhọrọ usoro nkwukọrịta ọ bụla. Ozi nkeonwe? Oku vidiyo? Niile n'aka gị. Gbalịa nkata vidiyo na-enweghị ndebanye aha, ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na igwefoto na mberede, gbanyụọ ya ma lelee ihe ndị ọzọ na-eme! Na-akpali mmasị? Ọ ga-e! Debanye aha na sonye na ndị na-anụrị ụtọ oge ha na Vichatter.
Mkparịta ụka ndụ
Looking ka na-ele foto na ide ozi ederede?
Ma na ezigbo ndị mmadụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ! Ugbu a, sonyere igwe ojii na-ekwurịta nkata vidiyo si n'akụkụ ụwa niile. Jikọọ ikori naanị gị ma ọ bụ ndị enyi gị. Tụgharịa igwefoto ma gosi onwe gị! Ma ọ bụ i nwere ike ime na-enweghị ya: chee n'echiche, n'ihi na ndị ọzọ anaghị ahụ gị. Lelee ihe ha na-eme na Wichatter video chat!
Ohere ndi ozo nwere na igwefoto na igwe okwu
Have nwere talent ọ bụla? Ngwa ngwa gwa ya! Kama nke ahụ, gbanye igwefoto wee mepụta ihe ngosi vidiyo gị, ihe ijuanya, nweta isi, onyinye, ma nye ndị ọzọ sonyere. Ghọọ kpakpando nke ,ntanetị, ọ dị nfe ma dịkwa mfe site na ngwa nkata vidiyo mkpanaka.
Gwuo ma merie
Ikpokọta ndụ nkwukọrịta na-akpali akpali ndụ ọchịchọ!
Ga na ngalaba dị iche iche nke ntanetị mmekọrịta na ilele mgbasa ozi vidio na-atọ ụtọ, ịnwere ike ịnakọta onyinye na mmezu zuru oke. Nyochaa onyinye nke ndi ozo sonyere ma gosi nke gi. Nweta otuto ma nweta ndị debanyere aha. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị mmadụ - emeso ya iji "superpowers"!
Nkata nkata. Nkata vidiyo niile
Ezubere nkata vidio vidio maka nkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ usersntanetị na-asụ Russian. A na-enwe nkwukọrịta na kamera kamera na-enweghị usoro. E nwere ọtụtụ dịgasị iche iche n'ime katalọgụ nke vidiyo vidiyo. Nwere ọtụtụ ihe ịhọrọ.
Nkata nkata online
Mkparịta ụka Roulette bụ ụzọ nkwukọrịta maka ndị ọrụ na-asụ Russian si n'akụkụ ụwa niile. N'ezie, nkata anyị na-abịa n'ịntanetị na- eleta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ si Russia na isi obodo ya Moscow. Nakwa isi obodo ugwu, ya bụ St. Petersburg.
Ma e wezụga nke ahụ, ndị si mba dị iche iche na-eji nkata ahụ. Ndị na-agwa ndị mmadụ okwu bụ ndị si mba dịka: Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, Estonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia na Kyrgyzstan.
Gịnị bụ video nkata na a random enyi? Nke a abughi nani ndi ọhụụ na ndị mmadụ, mana nkwukọrịta zuru oke, yana ịgbanweta ozi na ndị nọ ebe dị anya. Nwere ike ịgwa obi gị okwu ma ọ bụ gwa ya ihe ọchị. Kwupụta ịhụnanya gị na ịma mma ị na-ezute. Gịnị kpatara mma? Wususuw ho dɛn? N'ezie, n'etiti ụmụ agbọghọ Russia ị nwere ike ịchọta onye mara mma. Ma, ụmụ agbọghọ Russia bụ isiokwu dị iche. Mkparịta ụka vidio vidio, dabere na ụkpụrụ nke ọchụchọ aghara maka onye na-eme mkparịta ụka, meriri obi ndị mmadụ ozugbo. Kedu ihe ịchọrọ iji bido otu mkparịta ụka na kamera igwe okwu na igwe okwu? Nke mbu, gaa na saiti anyi, nihi na obu ya bu ebe edeputara n'efu oru maka nkwukọrịta. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịgbanye igwefoto weebụ, hazie ya. Emechaa ihe a niile, pịa bọtịnụ Malite. Mkparịta ụka vidiyo malitere.
Oge ọ bụla onye interlocutor ga jikọọ na gị. Ọ dị gị n’aka ikpebi ma ị nwere mmasị na ya ma ọ bụ na ị chọghị. A na-ahọrọ onye na-emegharị ọnụ n'okwu ahụ. Ezubere Bongakams na ntanetị n'ụzọ ị na - enweghị ike ịma tupu oge eruo onye ga - emechi ya.
Nkata nkata vidio 18
Video nkata roulette bụ kamera nkata. Ọhụrụ ọhụụ na mkparịta ụka roulette nwere otu ọnọdụ ahụ. O nwekwara ikike ịkwụsịtụ nkwukọrịta gị na kamera ahụ. Ya mere, ịkwesighi ime ihe ọkụ ọkụ. Mgbe ijikọ, ọ ga - ekwe omume ide ozi, gbasaa vidiyo site na kamera gị maka onye ọ bụla. Weebụsaịtị runetka bụ amaghi dịka ọ na-enweghị ndebanye aha. Naanị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na mkparịta ụka na ụmụ agbọghọ mara mma 18 afọ na okenye. Ọ na-abụkarị na nkata vidiyo anyị ka ị na-ahụ ụmụ agbọghọ na-agwụ ike ike gwụrụ maka ndụ isi awọ kwa ụbọchị.
Nkata nkata bụ ọrụ bara ezigbo uru. Ihe kachasị mma ndị mmadụ mepụtara maka oge niile ha dị adị bụ okwu a na-akwụghị ụgwọ. Nke a bụ ihe mere free video nkata bụ otú ewu ewu. Na mba ọ bụla, obodo ọ bụla, obodo nta ma ọ bụ obodo nta ọ bụla nwere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ chọrọ ịba ụba nke ndị maara, yana ikekwe ndị enyi. Na netwọk mmekọrịta n'oge na-adịbeghị anya bụ ndị enyemaka na-enyo enyo. Maka nke a, e mepụtara nkata vidiyo na-akwụghị ụgwọ. Obi dị anyị ụtọ iweta ọrụ ebube a. Mee ka ndi enyi anyi mara anyi n'efu. Nwere ike ịchọ ndị enyi na vidiyo na-enweghị akwụ ụgwọ. Naanị maka gị bụ ọrụ nkwukọrịta na-enweghị aha iji mee ihe ị chọrọ.
Live mgbasa ozi nke free ese foto
Izute random ụdị na ozugbo chat. Site na iji bọtịnụ dị mfe, soro ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa kparịta ụka na-akwụghị ụgwọ.
Mkparịta ụka vidiyo na ụmụ agbọghọ na-ekpo ọkụ, ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịhụ ụmụ nwoke, mgbe ịpịrị ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ naanị ijikọ ụmụ agbọghọ.
Nkata vidiyo maka ụmụ nwoke
Site na bisexuals gaa na nwoke idina nwoke, nkata vidio vidio anyị gosipụtara ụmụ okorobịa kachasị mma ị hụrụ na saịtị ọ bụla nwere mmasị na ịntanetị.
Lelee Cam na Live n'efu
roulette bụ naanị nke na-enye gị ohere ịme ihe ntanetị na ntanetị nke igwefoto vidiyo. Ebe ọ bụ saịtị zuru oke maka enweghị ndebanye aha, ịnwere ike ịmalite nkata vidiyo na ụmụ agbọghọ ozugbo. Girlsmụ agbọghọ kachasị na mbara ala dị otu ịpị aka. Nwekwara ike ịchọta ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụlọ nkata anyị. Anyị emeela ka saịtị dị mfe dị ka o kwere mee ka ị nwee ike ịchọta ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-eji kamera weebụ oge ọ bụla ị gara na nke anyị.
Ozugbo site na kamera weebụ
Gu chepụtara ya, roulette bụ ihe kachasị mma na ịntanetị. Ihe ị ga - eme bụ ịgbanye kamera gị ka ịmalite ịmalite ime igwefoto. Na enweghị nsogbu, enweghị ụdị ndebanye na enweghị ụgwọ zoro ezo, webcam ndị okenye anyị anaghị akwụ ụgwọ iji.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru dị na roulette:
Hụ foto gba ọtọ zuru ezu na igwefoto n'efu
Free na ụmụ agbọghọ na kamera weebụ na mgbasa ozi ndụ
Onyinye anyị na-akwụ ụgwọ dị awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu.
Enwe free ese foto ndị okenye na-enweghị zoro ezo ụgwọ
Anyị mere ka ọ dị mfe iji webcam ndị okenye anyị anaghị akwụ ụgwọ ka ị nwee ike izute ọtụtụ narị ụmụ agbọghọ ozugbo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ikori na ndị bịara abịa ma ọ bụ ọbụlagodi na ịchọrọ ịnụ nkata vidiyo na-akwụghị ụgwọ ebe ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-akwa ma na-eme eme n’ezie, roulette bụ ihe ị na-achọ. Chọọ ma họrọ ọrụ igwefoto toro eto dabara na agụụ gị; ihe ọ bụla ị chọrọ, ị ga-apụ na nkeji ole na ole!
Video nkata maka ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa
Mụ okorobịa ahụ ga-enwe obi ụtọ izute ụmụ agbọghọ ha rọrọ. Iesmụ nwanyị ga-ahụkwa ya n'anya, n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-eche ka echiche efu gị ga-adị ndụ. Anyị nwekwara cams n'efu maka ndị ọrụ nwoke nwere mmasị nwoke, na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịchọta kpọmkwem ihe ha na-achọ.
Na-ahọrọkarị ndị ọbịa? Ọ bụrụ otu a, njirimara nkata anyị ga - enyere gị aka inweta kamera na - enweghị isi na kamera nwa agbọghọ ma ọ bụ kamera nwoke. Gaa n'ihu na ịpị bọtịnụ "Ọzọ" ruo mgbe ịchọta kamera weebụ na-atụgharị gị n'ezie. Site na iri puku ndị ọrụ ntanetị, ị ga-ahụ onye gị na ya ga-akparịta ụka ma ọ bụ nwee mmekọrịta.
roulette na-enye gị nkata na-eme ka ị bụrụ akụkụ nke ihe nkiri jupụtara na fim ugboro ugboro. Ya mere chefuo banyere ikiri ihe nkiri oge niile wee bụrụ akụkụ nke otu n'ime ha kama. Ọ dị adị ma ọ na-eme ugbu a; gwa ndị mmadụ okwu na kamera ma jikwaa mmepe n'ihu gị. Never maghị ihe ga-eme ọzọ.
Saịtị a bụ maka ndị okenye 18 + naanị!
Ghaghị ịgafe afọ 18 ma ga-ekwenye na usoro dị n'okpuru:
Weebụsaịtị a nwere ozi, njikọ, onyonyo na vidiyo nke ọdịnaya (mkpokọta "Ọdịnaya Ọdịnaya"). Adịghị aga n'ihu ma ọ bụrụ na: (i) ị ruru afọ 18 ma ọ bụ afọ nke imirikiti na ikike ọ bụla ị ga-achọ ma ọ bụ nwee ike ịlele Ọdịnaya, nke ọ bụla ka ukwuu ("afọ nke ọtụtụ"), (ii) ọdịnaya ahụ kpasuo gị iwe; ma ọ bụ (iii) ile ọdịnaya ahụ abụghị iwu na obodo niile ị họọrọ ile ya.
Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịbanye na saịtị a, ị ji iyi na-ekweta ma ghọta ntaramahụhụ maka ịjụ iyi ụgha dịka 28 USC § 1746 na iwu na ụkpụrụ ndị ọzọ dị adị, ebe okwu niile ndị na-esonụ bụ eziokwu ma zie ezie:
Eruola m afọ imirikiti na ikike m;
Ihe okike nke m na-ele bụ maka ọdịmma nke onwe m, agaghị m ekpughe ụmụntakịrị ilele ihe a;
Achọrọ m ịnata / lee ihe ndị dị na ya;
Ekwenyere m na dị ka okenye na ọ bụ ikike a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nyere m iwu ịnata / ilele ọdịnaya ihe;
Ekwenyere m na mmekọrịta dị n'etiti ndị toro eto na-ekwenye ekwenye ma ọ bụ ihe rụrụ arụ;
Nlele, ịgụ na ibudata ọdịnaya nke ụdị a anaghị emebi ụkpụrụ nke obodo ọ bụla, obodo, obodo, steeti ma ọ bụ mba ebe m ga-elele, gụọ na / ma ọ bụ budata ọdịnaya ahụ;
Enwere m ọrụ maka ozi ụgha ọ bụla ma ọ bụ nsonaazụ iwu nke ikiri, ịgụ ma ọ bụ ibudata ihe ọ bụla na-egosi na saịtị a. Ekwenyekwara m na ọ nweghị weebụsaịtị a ma ọ bụ ndị mmekọ ya ga-aza ajụjụ maka nsonaazụ iwu ọ bụla sitere na aghụghọ ọ bụla banye na ojiji weebụsaịtị a;
Aghọtara m na ojiji nke weebụsaịtị a na-achịkwa usoro weebụsaịtị na ọnọdụ m tụlere ma nabata, ekwenyere m na m ga-agbachi ụdị Usoro ahụ.
Ekwenyere m na site na ịnweta weebụsaịtị a, ana m ekpughe onwe m na ụlọ ọrụ ọ bụla nke m nwere ikike ọ bụla ziri ezi ma ọ bụ nha anya na ikike nke steeti Florida, Miami-Dade County ma ọ bụrụ na esemokwu ọ bụla emee n'oge ọ bụla n'etiti weebụsaịtị a, mụ na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa ọ bụla;
Peeji ịdọ aka na ntị a bụ nkwekọrịta nkwekọrịta dị n'etiti m, weebụsaịtị a na / ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla m nwere mmasị na iwu ziri ezi. Ọ bụrụ na enwere ndokwa ọ bụla nke nkwekọrịta a enweghị ike ịmanye ya, a ga-etinye ihe fọdụrụnụ dị ka o kwere mee, na usoro a na-enweghị ike ịdebe iwu ga-eme ka ọ gbanwee ka ọ dị oke oke iji hụ na itinye ya n'ọrụ n'ụzọ kachasị dị nso nke ebumnuche ahụ. nke a.
Ndị niile na-eme ihe nkiri na saịtị a agafeela afọ 18, ekwenyela na ha ga-ese foto ma ọ bụ ma ọ bụ eserese, ma kwenye na ọ bụ ikike nke aka ha itinye mmekọrịta mmekọrịta ọnụ maka ntụrụndụ na agụmakwụkwọ nke ndị okenye ndị ọzọ, ekwenyere m na ọ bụ nke m ikike dị ka okenye ileba anya n'omume dị otú ahụ;
Vidio na onyonyo dị na saịtị a bụ maka ndị okenye tozuru etozu dịka enyemaka, agụmakwụkwọ na ntụrụndụ;
Aghọtara m na ọ bụ mpụ mpụ ịdebanye nkwupụta okwu ụgha n'okpuru arịrịọ ịgha ụgha; yana
Ekwenyere m na nkwekọrịta a na-achịkwa Global and National Trade Electronic Signalures Act (nke a na-akpọkarị "Electronic Signature Act), 15 USC. 7000, n'ihu, na site na ịhọrọ “Ekwenyere m. Banye ebe a "site na igosi nkwenye m ka m jikọta ya na usoro nkwekọrịta a, ana m edobe na mbinye aka n'okpuru bụ mbinye aka nke onwe m ma bụrụ ngosipụta nke nkwenye m ga-agbaso usoro nkwekọrịta a.
Lọ ọrụ a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na iwu kwadoro n'okpuru ọnọdụ niile nke ọrụ nkwenye na-enweghị iwu, ọkachasị n'ihe metụtara ọrụ nke ụmụ obere.
Etu esi echekwa vidiyo ka ị kparịta ụka na roulette
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na nkata nkata dị iche n'ọtụtụ ụzọ na saịtị ndị ọzọ yiri ya. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-edebanye aha na Skype. Gị na mmadụ nwere ike ịkparịta ụka naanị mgbe ị tinyechara ya na listi ịkpọtụrụ gị. Nọ na netwọk mmekọrịta na-emekwa ka ị dejupụta otu ajụjụ na ikike site na iji nọmba ekwentị ma ọ bụ e-mail. Mkparịta ụka nkata cha cha dị iche na usoro nkwukọrịta a, ebe ọ bụ na ndebanye aha adịghị mkpa iji mata ọrụ ahụ.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ puku mmadụ n'ụwa nile na-ahọrọ nkata vidiyo, anyị nwere ike ikwu banyere ewu ewu nke saịtị ahụ. N'ihi ya, ndị ọrụ nwere ike ịchọ ijide oge nke nkwukọrịta. A ga-echeta hangouts na-egbuke egbuke, nke a na-echefu echefu mgbe ị maara otu esi echekwa ha.
Gịnị kpatara o ji dị mkpa
Na mgbakwunye na inwe ike idekọ mkparịta ụka gị na onye dị mma, wee gagharịa, enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji mara otu esi echekwa vidiyo. Dịka ọmụmaatụ, a na-enwekarị ndị maara ndị nwere nsogbu isi. Ha nwere ike iyi gị egwu, gbalịa ime ka ị mee ihe na-adịghị mma. Site na ihe akaebe nke omume na-ekwesịghị ekwesị, ịnwere ike ịnye ndekọ nkwado. N'okwu a, a ga-eziga ezumike ahụ na mmachibido iwu.
Ọzọkwa, a pụrụ itinye vidiyo ndị na-atọ ụtọ na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ na YouTube. Taa, ọtụtụ saịtị jupụtara na vidiyo na-atọ ọchị ma ọ bụ na-emetụ n'ahụ. Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị mmadụ na-enweta ezigbo ego maka ịde vidiyo. Ka ị na-elekwu echiche, otú ahụ ka ego ị ga-enweta na-abawanye.
Algọridim ndekọ vidiyo
O nwere ike ịdị gị ka ọ naghị esiri gị ike ịna-akparịta ụka n’ihe a na-ekwu na vidio. Agbanyeghị, ọbụlagodi nwa akwụkwọ na-enweghị uche nwere ike ịnagide nke a, ọ bụrụ na ị maara usoro ahụ. Ihe ị chọrọ:
Gaa na webchat site na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, ma ọ bụ budata ngwa na ekwentị gị.
Hazie kamera gị na igwe okwu maka nkata nkata iji rụọ ọrụ nke ọma. Enweghị ngwaọrụ ndị a, usoro ihe omume agaghị amalite, na ndekọ vidiyo agaghị arụ ọrụ.
Chọta ma budata mmemme maka ịdekọ vidiyo na ụda sitere na .ntanetị. Ashampoo Snap, iSpring Free Cam, CamStudio na ihe ndị yiri ha ga-arụ ọrụ maka gị.
Dị njikere na enwere oghere na kọmputa gị iji chekwaa faịlụ ahụ. A chọrọ nke kacha nta nke 1-2 GB.
Mgbe video akparị ụka, ẹkedori usoro ihe omume na-amalite Ndekọ video.
Can nwere ike ịkwụsị ndekọ n'oge ọ bụla. Nha faịlụ ga-adabere na mkpebi nke kamera weebụ na oge oku.
Biko mara na ị ga-achọ ikike site na vidiyo gị ka ị gbaa. Ọ bụrụ na i tinyere ihe ndekọ na thentanetị, i nwere ike ime mkpesa. Nchịkọta mkparịta ụka na-akparịta ụka anaghị anabata ihe nkiri zoro ezo ma na-ewekarị onye ọ bụla esere ese na-enweghị ọchịchọ ya.
Ọ bụrụ na ị na-akparị ụka na vidiyo dị ka onye ọrụ e debara aha, ị nwere ike gbaa ndị ọbịa ọbịa na ibe gị ozi vidiyo. Na vidiyo ahụ, ị ​​nwere ikike ịgwa onwe gị, ihe masịrị gị na ihe ndị ị chọrọ maka ndị maara n'ọdịnihu. Kwere, ọ na-atọ ụtọ ịhụ mmadụ tupu ikuku ikuku izizi. Wayzọ a ị ga - ebu ụzọ mara onye ị ga - emeso. Mgbe ị debanyere ihe ngosi gị, ị ga - ewu ewu karịa, ndị ị maara ga - agbasawanye.